Basikety – «Amboaran’ny filoha» : mandravarava ny ekipan’Analamanga | NewsMada
Basikety – «Amboaran’ny filoha» : mandravarava ny ekipan’Analamanga
Niditra tamin’ny andro fahatelo ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny “Amboaran’ny filoha”, taranja basikety ho an’ny faritra afovoany. Fihaonana tanterahina etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina. Hatreto, mitarika ny TMBB sy ny MB2 All, ekipan’ny ligin’Analamanga. Mandravarava tanteraka izy ireo satria tsy resy mihitsy, hatreto. Nahazo fandresena fahatelo avy ny roa tonta ary mitarika ao amin’ny vondrona misy azy.
Samy nanamontsana tamin’ny isa mavesatra, nihoatra ny isa 100, ireo mpifanandrina taminy, ry zalahy. Ny TMBB, nanilika ny AS Roux avy any Analanjirofo, tamin’ny isa 109 no ho 55 ary 107 no ho 54 kosa ny nandavoan’ny MB2 All ny BCM Analanjirofo. Taorian’ity lalao ity, mitarika amin’ny isa 6 avy ny MB2 All ao amin’ny vondrona “B” sy ny BCM ho an’ny sokajy “A”.
Ankoatra izay, resin’ny USF tamin’ny isa 82 no ho 69, teo amin’ny famaranana, ny Fandrasa, ho an’ny faritra afovoany atsimo. Fihaonana, notanterahina tany amin’ny kianja mitafon’i Matsiatra Ambony. Marihina fa hisolo tena ny azy ireo izany, eo amin’ny “play off”, ny roa tonta. Tsiahivina fa manohana ity fiadiana ny “Amboaran’ny filoha” ity ny Telma.
Toy izao ireo voka-dalao, omaly alatsinainy :
-USBA Alaotra Mangoro (65) – (89) Ankarana Analamanga
-AS Fanalamanga Alaotra Mangoro (71) – (99) Ascut 2 Atsinanana
– Tac BB Analamanga (71) – (61) BBCA Alaotra Mangoro
-AS ST Pierre Alaotra Mangoro (71) – (78) ECBBA Analamanga (71-78)